Kungani Abathengisi Abangenayo Basebenzisa I-infographics | Martech Zone
Sabelane ngama-infographics amaningi kuMartech nase kuthuthukise iningi le-infographics yethu ngebhulogi, abaxhasi bayo kanye namanye amaklayenti ethu. Lokhu infographic kusuka ku-Performancing kuthinta ukuthi kungani izinkampani zokumaketha ezingenayo zisebenzisa i-infographic… kufaka phakathi ukuthi ziyahlukahluka, zixhumekile, futhi ziyalawuleka.
Akukona lokho kuphela, noma kunjalo. Njengoba sithuthukisa i-infographics asibhekile nje ukwakha i-linkbait. Sithola ukuthi ama-infographics athuthukiswa kangcono lapho ebilisa inqubo noma isihloko esiyinkimbinkimbi. Ukwenza lokhu ngokusobala kuvame ukusetshenziswa kalula kunokukubhala kokuthunyelwe okude noma iphepha elimhlophe. Futhi abantu babelana nabo kalula ngoba they angifuni ukuthi kuchazwe isihloko, noma! Ngamafuphi, okuqukethwe okubalulekile okulula ukuhlanganyela nezithameli zakho. Yilokho okuqukethwe ukumaketha kokuqukethwe!
Futhi ngenkathi ukuthola isixhumanisi kukuhle, asidingi njalo lapho sikusabalalisa. Sivame ukufaka ucingo esenzweni nakwezinye izimpawu zokushayela ukuhambisa ithrafikhi kuwebhusayithi yeklayenti. Futhi kuyasebenza!
Tags: marketing kwangaphakathiinfographicizinzuzo ze-infographicukwenza
Ubuhle: Thuthukisa Umthelela Wezikhangiso Zakho Zokuxhumana
Jul 20, 2012 ku-1: 28 AM
Kumele ngithole isikhathi esithile sokwenza i-infographic, ngiyabathanda laba.